Best Needleless Injector - China Shandong Zhongbaokang Medical
Marika: ZBK na OEM
Fanaterana ny fotoana: In 2 herinandro
Supply fahafahana: 1000 pcs isam-bolana
Tsy ilaina ZBK injector dia ahitana ny roa
1, ampahany ity dia ahitana ny fampiasana tsy mamokatra afa-tsy mameno adaptatera sy ny fanary tokan-tena mampiasa tsy mamokatra 0.3 ml diplaoma Tsy ilaina syringe (ampoule). Izy ireo no fototra sy ny fanomezana anarana fototry ny injector Tsy ilaina.
2, ity dia ahitana anjara toerana Injector sy Reset sy manome vovoka ny tsindrona
Rafitry ny tsirairay anjara
1.sterile afa-tsy nameno fampiasana adaptatera: Cap, fanjaitra mpihazona sy fanjaitra tubing.
2.Disposable tokan-tena mampiasa tsy mamokatra Mazava syringe: barika, Plunger sy fototra bara.
3.Injector: injector vatana, azo antoka hidin-trano ivelan'ny peratra, hidin-trano azo antoka anaty peratra sy ny trigger.
4.Reset toerana: fanerena ambony fonony, resetting fisotroana, resetting mpihazona toerana.
Product miasa fitsipika
Tsy ilaina injector dia tsindrona fitaovana amin'ny fanerena sy ny tsy mila fanjaitra nandritra ny mampiditra. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny faran'izay mafy lohataona manokana mba hanangana ny fanerena ambony, eo ambany fanerena io, ny rano, dia handeha hamaky fanafody tena manify lavaka, ary mamokatra ny ranon-javatra renirano izay tafiditra amin'ny hoditra ny aretina, ary Mitifitra ny subcutaneous sosona ny fanjaitra syringe.
1.Eliminate ny mampiditra fanaintainana.
2.Eliminate raha tsindronina tranga vokatry ny fanjaitra.
4.No Calluses, mamontsina, mivatra ary Vao mainka hitatra.
6.No mila manasa sy mora ny hiatrika; kely habeny sy mora entina; amblyopic marary mampiasa azy io koa.
Product fampiasana fampidirana
1.Prepare ny injector
2.Fill ny Syringe
Product kalitao fanomezan-toky
Ny orinasa izay no lasa Iso9001, ISO013485 kalitao iraisam-pirenena sy ISO14001 taratasy fanamarinana iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana.
Manana ny orinasa ara-batana, simika, biolojika laboratoara sy goavana hiteraka fitaovana mba hahazoana antoka ny vokatra dia pyrogen-maimaim-poana, misy poizina-maimaim-poana. Santionana koa isika efitrano mba hahazoana antoka ny vokatra tsara.
Service sy ny fanoloran-tena
Ny Mazava Injector vokarina amin'ny alalan'ny fitaovana ara-pitsaboana Shandong Zhongbaokang Co., dia tanteraka Ltd pitsapana, hanitsy ary homarinana avy amin'ny teny mba ho azo antoka ny vokatra tsara kalitao. Raha misy tsy fahombiazana nandritra ny fampiasana na ny kalitao olana, azafady miantso ny sampan-draharaha ara-barotra sy mitaky fanamboarana, ny telefaonina no No. + 86-0533-8688533.
Fara-teny fikasana: ny Injector sy Reset toerana iray taona fiantohana ny fotoana hatramin'ny daty sy ny fividianana ary ny FillingAdaptor Mazava Syringe (ampoule) manana fiantohana roa taona ny fotoana hatramin'ny daty hiteraka.
Previous: Mba hampahahendry Set miovaova ny fotoana Filter Ary ny anankiray Spike
Next: mameno adaptatera
amin'ny insuline Injector
Medical Mazava Injector
Mesotherapy tsindrona Gun
Needleless Injector Fa amin'ny insuline